Sida loo noqon xirriirka dugsiga a | Career khayraadka ka USAHello | USAHello
Ma rabtaa in aad ka shaqayso shaqo halkaas oo aad u caawin karto bulshada? Shaqooyinka xirriirka dugsiga waa shaqooyin wanaagsan u soo guurey iyo dadka kale ee ku hadla in ka badan hal luqad. Raadi wax ku saabsan in ay shaqaalaha xirriirka dugsiga a.
Waa maxay xirriirka dugsiga a?
dugsiga A (ama dugsiga-guriga) xirriirka waa qof isku xira dugsiga si waalidiinta iyo ardayda. Tani waa shaqo beer sii kordhaya maxaa yeelay, dugsiyada iyo aad u badan ayaa la ogaaday shaqaalaha xidhiidhka kuwaasi oo caawiya caruurta si fiican dugsiga ku samayn. Waa shaqo weyn u soo guurey ama qaxooti ku hadla in ka badan hal luqad iyo daryeel ku saabsan bulshada.
Magacyada kale ee shaqada this yihiin: xirriirka bulshada, sarkaalka xirriirka dugsiga, xirriirka dugsiga iyo guriga, shaqaalaha xirriirka waalidka-dugsiga, iyo xirriirka waalidka.
Maxaad ka fili kartaa in shaqo ee shaqaalaha xirriirka?
Waajibaadka xirriirka dugsiga a
A xirriirka dugsiga iyo guriga waxaa weeye in la caawiyo ardayda aflaxaada. Si arrintan loo sameeyo, waa inay dhawraan xiriir wanaagsan oo u dhexeeya dugsiga iyo qoysaskooda, oo waxay caawiyaan waalidiinta, aad.
xiriirinta dugsiga badan oo qoysaska aan ku hadlin Ingiriisi shaqeeyaan. Waxay caawiyaan ardayda cusub ee la qabsado dugsiga, oo ay ardayda ka caawiyaan dhibaatooyinka. isla xiriirinta dugsiga iyo guriga sidoo kale kaa caawin macalimiinta sameeyay asagoo xaqiijinaya in ay xidhiidhka la leh qoysaska waa wanaagsan yahay.
Halkan waxaa ku qoran liis ay ku qoran qaar ka mid ah waxyaabaha ay qabtaan:
macluumaad ka mid ah ardayda Share, waalidiinta, iyo shaqaalaha dugsiga
Calan u booqashada guriga iyo kulamada xafiiska waalidiinta
La hadal macalimiinta si aad u ogaato sida ay ardaydu samaynayaan
Abaabulaan dhacdooyinka iyo hawlaha taageera qoysaska bulshada, sida guryaha furan iyo potlucks
U dir ardayda iyo qoysaskooda si ay adeegyada ay u baahan yihiin
Barnaamijyada Orod loogu talagalay waalidiinta, sida fasalada waalidnimada iyo fasallada Ingiriisiga
Daawo xiriirinta dugsiga ka hadlaan waxa ay samaynayaan,
isla xiriirinta dugsiga iyo guriga inta badan ka shaqeeyaan hal dugsi, laakiin ay ka shaqeeyaan laga yaabaa in degmada dugsi daboolaya dugsiyo dhawr ah. Waxay inta badan waxay leeyihiin xafiis u gaar ah si ay u hadli karto ardayda iyo qoysaska ee gaarka loo leeyahay.
MUSHAHARKA for xirriirka dugsiga a
Mushaharka ee xirriirka dugsiga iyo guriga ah ee Maraykanka u dhaxeysa $25,535 in $37,400 sanad, mushaharka celcelis ahaan $19 saacadiiba.
shaqada Liaison dugsiyada waa shaqo fiican qof daryeela oo ku saabsan caruurta, ku hadli kara luqad kale, Oo waa ayo ixtiraam leh dhaqamada kala duwan, heerarka waxbarashada, iyo hab-nololeedka. Haddii aad ku raaxaysato oo xafladaha bulshada, tani waa shaqo wanaagsan kuu. Waxay noqon kartaa shaqo maskax adag si ay u caawiyaan dadka qaba xaaladaha kala duwan.
Friendly, dhiirigelinta, isku-duubni aan ku xukumayn
xiriir wanaagsan bulshada
aqoontooda dhaqanka iyo wacyigelinta
Awood u leh inay la hadasho oo ku saabsan mawduucyada adag
Hab wanaagsan in dhibaatooyinka
Ixtiraamka gaarka ah ee dadka
isgaadhsiin afka aad u wanaagsan asxaabta iyo qoysaska
Isgaadhsiinta qoran Good for warqado iyo emails
xirfadaha urureed fasallada waalidka iyo dhacdooyinka bulshada
xirfadaha Labada Luqadood
Daawo shaqaalaha xidhiidhka dugsiga ka hadlaan sababta ay u jecel yihiin shaqooyinkooda
Waxaad ka heli doontaa in aad xirfadaha luqadda, la xidhiidha bulshada, iyo xirfadaha xidhiidhka shakhsi ahaaneed waa aqoon fiican ee shaqada this.
Tababarka xiriirinta dugsiga
tababarka ugu fiican noqon lahayd waayo aragnimo hore barnaamijka adeegga bulshada, dugsiga, ama urur bulshada.
Uma baahnid shahaado gaar ah si ay u noqdaan xirriirka dugsiga a. Laakiin isla xiriirinta dugsiga iyo guriga inta badan la dadka qaxootiga iyo soo galootiga shaqeeyaan. Waxaad qaadan kartaa fasalka our free ku saabsan waxbarista ardayda qaxootiga iyo soo galootiga. Waxaa ka mid ah cashar ku saabsan qoysaska shaqeeya.
Experience, waayo, xiriirinta dugsiga
degmooyinka dugsiyada qaarkood waxay u baahan xiriirinta dugsiga si ay khibrad u leh qoysaska shaqeeya. Haddii aadan weli ma lahayn waayo-aragnimo ah, waad ku tabaruci kartaa dugsigaaga degaanka, at urur dugsiga ka dib, ama ururada kale ee beesha oo ka caawiya qoysaska. Tusaale ahaan aad awoodid iskaa wax u qabso kula Reading Partners. Ama aad awoodid hesho barnaamij dugsi kadib ah kuu dhow halkaas oo iskaa wax u qabso ayaa loo baahan yahay.
Waxa kale oo aad ka raadin kartaa FindHello ururada bulshada ee magaalada aad ku. Haddii aad raadinayso shaqo mushaari ah, Schoolspring.com waa website a shaqooyinka waxbarasho.
Hagaha ku noqonayaan xirriirka waalidka wax ku ool ah